Moa ve ny hetahetan'ny fizahan-tany any Arabia Saodita 2030 maniry fatratra amin'ny ara-dalàna vaovaon'ny COVID-19?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Arabia Saodita » Moa ve ny hetahetan'ny fizahan-tany any Arabia Saodita 2030 maniry fatratra amin'ny ara-dalàna vaovaon'ny COVID-19?
Arabia Saodita dia nilaza fa mbola mijanona eo amin'ny làlana hahatratra ny tanjona kendrena amin'ny fandraisana ireo mpizahatany 100 tapitrisa isan-taona amin'ny taona 2030. Midika izany fa fampitomboana enina heny ny fahatongavan'ireo mpizahatany ao anatin'ny 11 taona ho avy, avy amin'ireo mpitsidika 17 tapitrisa noraisin'ny firenena tamin'ny taona 2019.
Ny fitomboana amin'ity maridrefy ity izao dia miseho ho be fatratra, miaraka amin'ny fiatraikany lehibe misy eo amin'ny COVID-19 mitohy amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny manam-pahaizana momba ny indostria dia naminavina fa ny fahatongavan'ny firenena iraisam-pirenena Saudi Arabia dia hahatratra 21 tapitrisa amin'ny 2024, ary noho izany, ny fiakarana ho 100 tapitrisa amin'ny 2030 dia mbola sarotra be amin'ny toetrandro ankehitriny.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy afaka ny ho lasa hery matanjaka ao amin'ny tsenan'ny faritra Atsinanana i Arabia Saodita, ny The Red Sea Project dia mikendry ny hametraka an'i Saudi Arabia ho toeram-pizahantany manintona izay mety hahasarika ny mpizahatany maro izay mankany Dubai isan-taona, indrindra ireo mpandeha be vola avy any Angletera sy Sina. Mandritra izany fotoana izany, ny renivohitr'i Riyadh dia manana ny fahafaha-mampiorina ny tenany ho toeran-karena lafo vidy hampiadiana an'i Dubai.
Ny fisarihana sy ny fankalazana ara-pinoana dia efa loharanom-pizahantany lehibe indrindra ao amin'ny firenena miaraka amin'ireo mpitsidika iraisam-pirenena an-tapitrisany tonga handray anjara amin'ny Hajj sy Umrah. Arabia Saodita mora azo kokoa dia mety hisarika mpitsidika silamo marobe kokoa amin'ireo hetsika ireo isan-taona.
Arabia Saodita koa dia tranon'ny tranonkala manan-tantara efa an'arivony taona maro lasa izay, ary noho izany ny firenena dia mety ho lasa ivon'ny fizahan-tany ara-kolontsaina any Moyen Orient amin'ny alàlan'ny fanamasinana ny karazana fizahan-tany mahasarika azy.
Ny fizahan-tany ara-panatanjahantena dia sehatra iray hafa izay ananan'i Arabia Saodita vola be, vao tsy ela akory izay izay nampiantrano an'i Anthony Joshua, izay tompon-daka eran-tany manohitra an'i Andy Ruiz. Ny fampiantranoana hetsika ara-panatanjahantena lehibe dia manome an'i Arabia Saodita fotoana lehibe ahazoana mivarotra tena ho toerana fizahan-tany voalohany.
Arabia Saodita dia manolotra zavatra betsaka izay mahasarika mpitsidika iraisam-pirenena marobe isan-taona. Ny firenena dia manana hetsi-panoherana marobe hanampy amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny mpizahatany feno fatratra hatramin'ny 2030, saingy ho hita eo ihany ny habetsaky ny fetran'ny fetra COVID-19 amin'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena mandritra ny taona ho avy.